Xtify: Vahaolana Push Mobile Enterprise | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 7, 2013 Douglas Karr
Vao novidian'ny IBM, Xtify dia sehatra fampandrenesana fanerena teratany ho an'ny iOS, Android, Windows ary ny tranokala finday.
Xtify manampy ny mpivarotra handefa fampandrenesana sy votoatin'ny tosika mifandraika sy azo ampiharina mba hamporisihana ny fifamofoana sy ny fanonerana vola, hitandrina ny marikao ho tampon-tsaina. Ny atiny dia azo alefa mavitrika mifototra amin'ny fizarana, toerana ary fitondran-tena. Ny fiasa rehetra dia misy amin'ny alàlan'ny dashboard-friendly marketer na API ho an'ny hafatra ateraky ny rafitra.
Fanolorana avy amin'ny Xtify ahitana:
Fampandrenesana momba ny tera-tany sy tranonkala - ampidiro ao amin'ny tranonkalanao rehetra ny fampandrenesana lasibatra ary koa ny fampiharana iOS, Android, BlackBerry, ary Windows anao.
Trangam-pitarika hetsika sy toerana - Ampiasao ny fitondran-tenan'ny mpanjifa sy ny toerana misy azy ireo, ary apetaho ireo ampahan'ny mpanjifa handroahana ireo fiasa misy dikany tianao
Push, SMS ary Passbook - Ampidiro ao amin'ny fantsona mety aminy ny mpanjifanao finday. Fandefasana marika, fampiasana fampiharana ary fanodikodinam-bola miaraka amin'ireo fitaovan'ny mpivarotra.
Fandrefesana amin'ny fotoana tena izy - Raiso ny fampielezan-kevitra, ny fampiharana ary ny haavon'ny mpampiasa Analytics. Fantaro ny fomba itondran'ny hafatrao ny fifandraisan'ny marika sy ny hetsika tadiavina.
Ireo mpandray anjara amin'ny orinasa dia misy ny fampielezan-kevitra sy ny hafatra tsy voafetra, ny fizarana ho an'ny mpanjifa tsy voafetra, ny Geo-Targeting ary ny Geo-Triggering amin'ny ora tena izy, ny fampiharana QA, ny fiofanana, ny fampielezan-kevitra ary ny zanatany (iOS, Android, BlackBerry, Windows) ary Web (finday, latabatra, Desktop ) Fampandrenesana, SMS ary Passbook.